Faka iSteam kuDebian Wheezy ngaphandle kokufa uzama | Kusuka kuLinux
eliotime3000 | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sanibonani nonke. Ngokuqinisekile, abaningi bazobe sebejabulela kakade I-Steam yesikhulumi I-GNU / Linux. Kodwa-ke, iningi lalabo abasebenzisa Isitebele se-Debian (Wheezy)Baphula amakhanda ngokuzama ukufaka iSteam kakhulu.
Ngizokukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani ngaphandle kokuthi ufe uzama, noma imiphumela eminingi ingaphumelelanga, ngoba ukuncika okudingayo kusezikhundleni ze-Ubuntu, futhi / noma ukwesekwa kobuciko obuningi bekungakaqalwa.
Ukuze senze lokhu, kufanele senze okulandelayo:
Faka ukwesekwa okwakhiwe ngamakhodi we-Debian Wheezy:
Faka ukuncika okusibuzwa umusi (ngeshwa, kusuka ku-Ubuntu), ngale nqubo:
Landa iphakethe le-Steam ngale nqubo:
Linda iklayenti livuselele, lingene ngemvume futhi yilokho kuphela.
Uma unamakhadi evidiyo afana ne-ATI / AMD noma i-NVIDIA, siphakamisa ukuthi ufake amadrayivu okuphathelene nokusebenza kangcono emidlalweni oyilanda mahhala noma oyithenga ngale nkundla.
Ngiyethemba kube wusizo kuleyo miphefumulo eye yazibulala ifuna indlela yokufaka iSteam ngaphandle kokufa lapho izama.
I-PS: Nasi isithombe-skrini sami se-Steam yami ku- UDebian Wheezy:
Futhi angisho ukuvalelisa ngaphandle kokubonga i- Abasebenzisi be-Steam, kuya ku I-Debian Wiki futhi kuya Isithangami esisemthethweni seDebian ngokwenza lokhu kwenzeke.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Faka iSteam kuDebian Wheezy ngaphandle kokufa uzama
Siyabonga ngokwabelana nge-eliotime3000. Iqiniso ukuthi iSteam iyamangalisa, imidlalo emihle kakhulu egijima ngokwendabuko kuLinux futhi nsuku zonke ngokuya nangcono.
Yebo, ngiyabonga ngokuncoma. Futhi, njengoba ngingasebenzisi i-SUDO, ngikhohliwe ukuyifaka (sibonga abahleli ngokungeza i-Sudo ne "&" kuyo), futhi uma ungasebenzisi ifayili le-.sh, ungenza:
Sekuyisikhathi eside bakhipha inguqulo engama-64-bit, manje kuyadingeka ukuthi onjiniyela bakhiphe imidlalo yaleyo nguqulo.
Ngalokho ngivumelana nawe. Futhi, njengoba ngisebenzisa ama-32-bit Debian Wheezy, akufanele kube yinkinga.
Ngenkathi iklayenti le-Steam selivele liyi-64-bit, lisathembele kwiphakethe le-Debian multiarch ukwenza imidlalo engakabi yi-64-bit.
Kunoma ikuphi, ngizohlola imidlalo efana ne-DOTA 2 neTeam Fortress (anginayo imali yokukhokhela imidlalo efana neHalf-Life okwamanje).
Imfihlo ukusizakala ngokukhushulwa, ngithenge i-saga kokunye kwalokhu. Futhi ku-steam kunenqwaba ethobekile
Mngani ukuthi ukuphawula kwakho: (ngeshwa, kusuka ku-Ubuntu), akuzwakali njengokululaza, ngoba ngenxa ye-Ubuntu kune-Steam ku-Linux, ngoba ngenxa ye-Ubuntu GNU / Linux yathandwa futhi yasebenza ku-Valve ukuthi icabange ngokufaka i-Linux emdlalweni wayo imakethe, ngizama nje ukugxeka okwakhayo, akukho okunye, wonke umuntu unombono wakhe futhi ngiyakuhlonipha lokho, Sanibonani
Ngiyazi, kepha bengikhuluma ngokuncika ekucelayo (jockey-common). Emagatsheni we-Testing (Jessie) ne-Unstable (Sid) awakubuzi lokhu kuncika futhi awekho ngisho nasezikhundleni zokuphumula eziyinhloko zalawo magatsha we-Debian.
INaa, okuwukuphela kwesizathu somusi kuLinux, yisifiso sokulungiselela ikhonsoli yayo isuselwa kwiLinux.
isebenza kanjani i-kernel 3.2? ngukuthi njengamanje ngisebenzisa entsha, kepha ngenxa ye-U nokuhambisana nomshayeli ophethe ifa ngihlela ukushintshela ku-eOS esebenzisa leyo kernel
Manje, ngisebenza ngokushelela futhi ngaphandle kwenkinga (futhi ngisebenzisa ividiyo ehlanganisiwe ye-Intel ne-MESA ebuyekeziwe).
Angazi ukuthi le ndlela inenzuzo yini kunaleyo engiyenzile, shintsha indawo yokugcina enkulu ngiyi-jessie, ngithole ukubuyekeza kahle, ngithole umusi wokufaka: i386 bese ngiguqula indawo yokugcina enkulu ngiyibuyisele ku-wheezy.
Akuthinti lutho kukodwa, ngaphandle kokuthi ufuna ukudela ukuzinza okuthile ukufaka inguqulo engu-100% eguqulelwe i-Debian.
Kulungile, ngiyabonga ngokucaciselwa.
UJessie uzinzile impela.
Ngabe kungcono ukuyifaka njengoba kusho u-OtakuLogan noma njengoba i-eliotime3000 iphakamisa?
Uma ikusebenzela, uyayincoma. Lokho kulula
Ngabe ucabanga ukuthi kuhle ukushintsha uhlobo lwe-libc6 kanjalo nje? lokho akusebenzi kuzo zonke izimo ..!
Kepha lokho kuya ngokuncika okukhiqizayo lapho ufaka iphakheji esemthethweni ye-.deb.
Aaaay amehlo ami ngesihloko esizenzakalelayo se-Gnome namafonti we-Debian !!!
Sengijwayele i-GNOME kangangoba ngiyisebenzisa nsuku zonke. Ake sibheke ukuthi ngiphume kuwo isikhashana ngiphefumule umoya omusha.
: Noma nje nge-steam nginqume ukushintshela kubuntu, ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokubuyela ku-debian noma ku-crunchbang 😀
Lokho kwenzeka kuwe ngokungakholelwa ku-Debian GNU / Linux.
Manje, ngijabule nge-Steam yami futhi ngilinde isiqinisekiso sami sokudlala i-DoTA 2 ngokushesha.
Sengivele nginayo 😀 kepha lokho bekuyinto embi ngokuzama ukuyifaka ngenkathi ngikwi-beta futhi ngiyeke ngokushesha okukhulu, zama ompetha be-regnum, futhi ngumdlalo omuhle, uwuhlobo lwe-wow.
Lapho ngizama ukufaka i-.deb ngithola lokhu: /
Le phakheji ayikhishwa
Ukuncika akwanelisi: libc6 (> = 2.15)
Ngicabanga ukuthi iskripthi esikwenzayo ukufaka uhlobo olusha lwe-libc6 kusuka kumakhosombe we-ubuntu, ngakho-ke unezinketho ezimbili: noma ngabe usebenzisa iskripthi ukukwenza, noma ufaka iphakheji kusuka ezinqolobaneni zokuhlola i-debian.
Ngiyabonga, kepha ngisebenzise iskripthi futhi akusebenzi: /
Uma ungatholi u- "sh" kuqala, bese ubeka isikhala bese ubhala igama lesikripthi bese ushaya u-Enter.
ukuphuma kufana nephutha lokuncika, kepha angiboni ukuthi ngiyilungisa kanjani.
Yizame ngokusebenzisa iskripthi njenge-ROOT. Angijwayele ukusebenzisa iSUDO ngoba iyangihlupha ngezimvume.
Imininingwane enhle. Futhi ngiyifakile ngombhalo futhi iqiniso ukuthi inoboya.
Isikripthi esihle, kepha bengingazi ukuthi ngiwusebenzisa kanjani lowo mbhalo we-GitHub, ngakho-ke ngaya kobheka izinkundla zeSteam ukuthola isixazululo esibambekayo.
Nginenkinga, konke kuhamba kahle kuze kube yingxenye engitshelayo
Sudo dpkg -i umusi.deb
yilapho lokhu kubonakala kimi.
impande @ NV55S09u: / home / diego-m # sudo dpkg -i steam.deb
(Kufundwa i-database… amafayela ayi-128696 noma izinkomba ezifakiwe njengamanje.)
Ilungiselela ukumiselela isiqalisi se-steam 1.0.0.42 (kusetshenziswa i-steam.deb)…
Ithula indawo yokuqalisa i-steam-launcher ...
dpkg: Izinkinga zokuncika zivimbela ukumiswa kwesiqalisi se-steam:
isiqalisi se-steam sincike ku-libc6 (> = 2.15); Noma kunjalo:
Uhlobo lwe- `libc6: amd64 'kusistimu ngu-2.13-38.
i-dpkg: iphutha lokucubungula i-steam-launcher (-install):
Izinkinga zokuncika - kwesokunxele kungalungiselelwe
Icubungula izimbangela ze-man-db ...
Icubungula okubangela i-hicolor-icon-theme ...
Icubungula izimbangela zedesktop-file-utils ...
Icubungula izimbangela zamamenyu we-gnome ...
impande @ NV55S09u: / home / diego-m #
futhi lapho ngizama ukubeka lokho kuncika, i-libc6 eyodwa inginika okufanayo: amd64 ne-libc6
impande @ NV55S09u: / home / diego-m # apt-get install libc6: amd64
i-libc6 isivele inguqulo yayo yakamuva.
Ungahle ufune ukusebenzisa i- apt-get -f install ukuyilungisa:
isiqalisi se-steam: Kuya nge-libc6 (> = 2.15) kepha kuzofakwa i-2.13-38
E: Ukuncika akufinyelelwanga. Zama i- apt-get -f install ngaphandle kwamaphakeji (noma ucacise ukusebenza).
impande @ NV55S09u: / home / diego-m # apt-get install libc6
Ngiyethemba ukuthi inkinga yami akuyona imikhonzo nokubonga okusobala kakhulu
Ngincoma ukweluleka ukuthi kufanele babeke
Ngabe kukhona ongangisiza ukuthi yini inkinga yami
impande @ debian: / ikhaya / wishmario / Ukulanda # Sudo dpkg -i steam.deb
(Kufundwa i-database… amafayela ayi-161869 noma izinkomba ezifakiwe njengamanje.)
i-dpkg: izingqinamba zokuncika ezivimbela ukusethwa kwesiqalisi se-steam:
Uhlobo lwe-`libc6: amd64 'kusistimu ngu-2.13-38.
UJavier Madrid kusho
Lokhu kufaka kufanele kuvuselelwe noma kususwe. Akusasebenzi.
Phendula kuJavier Madrid
Nginezinkinga zokufaka i-steam
U-Esteban Laguerre kusho
Phendula u-Esteban Laguerre
Sawubona, ungayithathi njengogaxekile kepha ngithole isisombululo esichazayo, uma okungenhla kungakusizanga, iya kule vidiyo http://youtu.be/V5LkpR179WQ encazelweni sebenzisa isixhumanisi sesibili, ungayinaki ividiyo, bese unikeza ikhona (ngemuva kokucindezela i-liink) lapho ithi landa khona i-zip, kulelo fayela. zip kuzotholakala ifayela le-.deb, lifake ngesifaki sesoftware futhi yilokho kuphela
Angazi, ngizamile lokhu, kepha kungihluleka,
Yebo, lokhu ungitshela njalo; bash: ./debian_install.sh: Imvume inqatshiwe
nalokhu: Amaphutha ahlangatshezwe ngenkathi kucutshungulwa:
ngokusobala inginikeza iphutha ngenxa yezinkinga zokuncika….
Kuhle !!, nginomfana wami oneminyaka engu-9, ongumdlali futhi ingxenye yesikhathi angena ngaso emafasiteleni womdlalo unezinkinga, ngakho-ke ngine-ubuntu efakiwe manje ngifuna ukuhambisa i-pc kuphela ukuzinza ngifaka umusi ngisebenzise isoftware yamahhala nemidlalo ekhokhelwayo endaweni yesikhulumi.
Sawubona ngizamile iskripthi
futhi ngithola lokhu ngaso sonke isikhathi:
–2014-06-09 12: 01: 58– (umzamo: 9) http://sh/
Ukuxhuma ne-sh (sh) [193.223.78.211]: 80… kwehlulekile: Isikhathi sokuxhuma siphelelwe yisikhathi.
Ngifuna ukuzama ukudlala i-dota ku-debian whezzy ngoba emawindini yehluleka futhi iyanginqamula!
Ngixazulule ngalesi sixhumanisi,
faka i-PlayOnLinux. futhi ngomumo
ayisebenzi kuma-debian wheezy 64bits
iphutha: alikwazi ukwanelisa ukuncika: libc6 (> + 2.15)
Ngemuva kokubuyekeza, ngithola iphutha elifana naleli:
Iphutha elibulalayo: Yehlulekile ukulayisha i-steamui.so
Ngiyafana, angikwazi ukufaka umusi ku-debian sid
Ngiyixazulule ... ngifaka imitapo yolwazi i386. Kusebenza kahle manje.
Angikwazanga ukuyifaka, ngithole lokhu engikwenzayo bash: ./debian_install.sh: Imvume inqatshiwe